Donation | HTCT - High Tech Concrete Technology, Myanmar
Despite HTCT’s rapid growth and hectic project schedule, the company has always remained committed to the less fortunate in the country. It’s Corporate Social Responsibility (CSR) initiative actively involves the Management and staff in many non-profit and charity projects. Besides giving financial aid, the staff at HTCT is always on the ground to interact with the less fortunate to motivate and lend them support.
As part of Shwe Taung Group, our CSR engagements are aligned with the commitments taken by our group in terms of people, environment, governance and communities. To learn more about these commitments, you can visit Shwe Taung Group’s website
CSR Activities in Inle
Micro Hydropower 50KVA Donation
(2010 – 2012) လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်း
(၂၀၁၁-၂၀၁၂) ခုနှစ် စုစုပေါင်း CSR လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု ကုန်ကျစရိတ်မှာ (၃၆,၆၂၈,၄၂၃)ကျပ် ဖြစ်ပါသည်။
(၂၇.၀၉.၂၀၁၁) ရက်နေ့ ကယားပြည်နယ်၊ နန်းကွပ်ရေဘေးအတွက် သဲ(၅၄၀)ကျင်း လှူဒါန်းခြင်း။
(၀၆.၀၈.၂၀၁၂) ရက်နေ့ ဝမ်ကွန်-လောလာလိ တံတား တည်ဆောက်ပေးခြင်း
(၁၉.၁၂.၂၀၁၂) ရက်နေ့ ကယားပြည်နယ်၊တီလုံကျေးရွာ အုပ်စု၊ဝမ်းငေါ့ကျေးရွာတွင် (50 KVA) ရေအားလျှပ်စစ်တည်ဆောက်ပေးခြင်း
(2013 – 2014) လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်း
(၂၀၁၃-၂၀၁၄) ခုနှစ် စုစုပေါင်း CSR လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု ကုန်ကျစရိတ်မှာ (၂၇,၀၉၁,၃၄၀) ကျပ် ဖြစ်ပါသည်။
(၂၂.၀၁.၂၀၁၃) ရက်နေ့ ဒေါ်စိုများရွာ မီးဘေးဒုက္ခသည်များအတွက် ငွေ(၁၀)သိန်း လှူဒါန်းခြင်း။
(၁၀.၀၁.၂၀၁၄) ရက်နေ့တွင် ကယားပြည်နယ်နေ့တွင် ကျင်းပသော အားကစားပြိုင်ပွဲများ အတွက် ငွေသား(၁၆)သိန်း လှူဒါန်းခြင်း။
(၁၈.၀၈.၂၀၁၃) ရက်နေ့ ကယားပြည်နယ်အတွင်းရှိ စာသင်ကျောင်းများအတွက် စာသင်ခုံများ လှူဒါန်းခြင်း။
(၀၅.၀၃.၂၀၁၄) ရက်နေ့ လေးမိုင်အလယ်တန်းကျောင်းမှ ဆရာ/ဆရာမများအတွက် နားနေဆောင် ဆောက်လုပ်လှူဒါန်းခြင်း။
(၀၅.၀၃.၂၀၁၄) ရက်နေ့ သတ္တပလူဘုန်းကြီးကျောင်းအား သိမ်ကျောင်းဆောက်လုပ်လှူဒါန်းခြင်း။
(2014– 2015) လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်း
(၂၀၁၄-၂၀၁၅)ခုနှစ် စုစုပေါင်း CSR လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု ကုန်ကျစရိတ်မှာ (၁၁၉,၁၆၆,၄၃၀)ကျပ် ဖြစ်ပါသည်။
(၃၀.၀၅.၂၀၁၄) ရက်နေ့ မိုက်ကန်းအလယ်တန်း စာသင်ကျောင်းသို့ စာသင်စာပွဲခုံ လှူဒါန်းခြင်း။
(၃၁.၀၅.၂၀၁၄) ရက်နေ့ မျက်စိခွဲစိတ်သော သီတဂူအဖွဲ့သို့ ဒီဇယ်ဆီနှင့် ငွေသားလှူဒါန်းခြင်း။
(၃၁.၀၅.၂၀၁၄) ရက်နေ့ လောဓလေး တိုက်နယ်ဆေးရုံးအဝင်လမ်း နှင့် လူသွားစင်္ကြန်လမ်းအား ကွန်ကရစ်လောင်းလှူခြင်း။
(၁၄.၀၆.၂၀၁၄) ရက်နေ့ လောပိတရဲစခန်း၌ အဆောက်အဦး ဆောက်လုပ်လှူဒါန်းခြင်း။
(၂၁.၀၈.၂၀၁၄) ရက်နေ့ အင်းလေးဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်း မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ။
(၁၇.၀၉.၂၀၁၄) ရက်နေ့ ဆိုလစယ် ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းအတွက် သဲ၊ကျောက်၊ဘိလပ်မြေ နှင့် မျက်နှာကျက် လှူဒါန်းခြင်း။
(၀၁.၀၁.၂၀၁၅) ရက်နေ့ ကယားပြည်နယ်ရှိ မသန်မစွမ်းကျောင်းသား/ ကျောင်းသူများအတွက် ပညာရေး ရန်ပုံငွေ လှူဒါန်းစဉ် မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ။
(၀၁.၀၁.၂၀၁၅) ရက်နေ့ ကယားပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ရုံးအတွက် 93.75KVA3Phase Diesel Generator နှင့် Dump Truck Car များလှူဒါန်းခြင်း။
(၂၀၁၅-၂၀၁၆)ခုနှစ် စုစုပေါင်း CSR လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု ကုန်ကျစရိတ်မှာ (၁၀၃,၈၁၃,၉၁၂)ကျပ် ဖြစ်ပါသည်။
(၂၉.၁၂.၂၀၁၅) ရက်နေ့ (၆၄)ကြိမ်မြောက် ကယားပြည်နယ်နေ့ အထိမ်းအမှတ်ပွဲအတွက် ငွေသား(၁၀)သိန်း လှူဒါန်းခြင်း။
(၃၀.၀၄.၂၀၁၅) ရက်နေ့ အင်းလေးဒေသ CSR လုပ်ငန်း မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ။
(၂၇.၀၆.၂၀၁၅) ရက်နေ့ BHP-3 Plant တွင် စိုက်ပျိုးရန်အတွက် ပျိုးပင်ပေါက် ဝယ်ယူခြင်း။
(၁၅.၀၇.၂၀၁၅) ရက်နေ့ ဧရာဝတီတိုင်းရှိ အောင်တော်မူ ဘုန်းတော်ကြီးသင်ပညာရေးကျောင်းသို့ လှူဒါန်းခြင်း။
(၂၄.၀၇.၂၀၁၅) ရက်နေ့ မထောခူဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းသို့ လှူဒါန်းခြင်း။
(၀၁.၀၉.၂၀၁၅) ရက်နေ့ အင်းလေးဒေသ CSR လုပ်ငန်း မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ။
(၁၀.၀၉.၂၀၁၅) ရက်နေ့ ကယားပြည်နယ်မဇ္ဈိမလူငယ်အင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းကျောင်း မှတ်တမ်း ဓာတ်ပုံ။
(၁၅.၁၀.၂၀၁၅) ရက်နေ့ မော်ချီး ဒုက္ခသည်များအတွက် ခေါက်ဆွဲကြော်နှင့် ထမင်းကြော် လှူဒါန်းခြင်း။
(၂၀.၁၀.၂၀၁၅) ရက်နေ့ မော်ချီး ဒုက္ခသည်များအတွက် ဆန်လှူဒါန်းခြင်း။
(၂၀.၁၀.၂၀၁၅) ရက်နေ့ မော်ချီး ဒုက္ခသည်များအတွက် စောင် လှူဒါန်းခြင်း။
(၁၃.၁၁.၂၀၁၅) ရက်နေ့ အင်းလေးဒေသ တောင်ခမောက်ချောင်း အတွင်းနှုံးတား တံမံတည်ဆောက်ခြင်း မှတ်တမ်း ဓာတ်ပုံ။
(၁၈.၁၁.၂၀၁၅) ရက်နေ့ အင်းလေးဒေသ CSR လုပ်ငန်းမှတ်တမ်း ဓာတ်ပုံ။
(၂၅.၁၁.၂၀၁၅) ရက်နေ့ ဘိမ်းအစားထိုးနှစ်ရှည်ပင် စိုက်ပျိုးရန်အတွက် ဖယ်ခုံလူငယ်ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့သို့ လှူဒါန်းခြင်း။
(၁၀.၁၂.၂၀၁၅) ရက်နေ့ မဇ္ဈိမနှလုံးသားလူငယ်အဖွဲ့မှ ကယားပြည်နယ်နေ့ အထိမ်းအမှတ်ပွဲ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာပြခန်းကျင်းပရန် အတွက် လှူဒါန်းခြင်း။
(၂၉.၀၂.၂၀၁၆) ရက်နေ့ ကယားပြည်နယ်၊ လွိုင်ကော်မြို့ ဘီလူးချောင်း အမှတ်(၃) ဓါတ်အားပေးစက်ရုံရှိ ကြက်တောင်ရိုက်ကွင်းနှင့် ကလေးကစားစရာအရုပ်များအား ဆေးသုတ်ရန်အတွက် ဆေးဝယ်ခြင်းနှင့် အားကစားပစ္စည်းဝယ်ခြင်း။
(၂၁.၀၃.၂၀၁၆) ရက်နေ့ အင်းလေးဒေသ CSR လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ
(2016 – 2017) လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်း
(၂၀၁၆-၂၀၁၇) ခုနှစ် စုစုပေါင်း CSR လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု ကုန်ကျစရိတ်မှာ (၁၀၃,၈၁၃,၉၁၂)ကျပ် ဖြစ်ပါသည်။
(၁၇.၀၄.၂၀၁၆) ရက်နေ့ ကယားပြည်နယ်၊ လွိုင်ကော်မြို့၊ လောပိတကျေးရွာ အတွက် မီးသတ်ကားများ ထားရန် အဆောက်အဦး ဆောက်လုပ်ပေးခြင်း။
(၁၀.၀၅.၂၀၁၆) ရက်နေ့ ကယားပြည်နယ်၊ လွိုင်ကော်မြို့ နွားလပိုးကျေးရွာအုပ်စု၊ လယ်တွဲကျေးရွာရှိ အိမ်ခြေ(၃၀၀)ကျော်အတွက် ရေတွင်း(၁)တွင်း လှူဒါန်းခြင်း။
(၂၉.၀၅.၂၀၁၆) ရက်နေ့ ကယားပြည်နယ်၊ လွိုင်ကော်မြို့ လောဓလေး ဓမ္မစင်္ကြာကျောင်းတိုက်တွင်း ရှိ ဓမ္မစကူး ကျောင်းသား(၇၀)အား ခေါက်ဆွဲကြော် ကျွေးခြင်း။
(၀၈.၀၆.၂၀၁၆) ရက်နေ့ ကယားပြည်နယ်၊ လွိုင်ကော်မြို့ လောပိတကျေးရွာအုပ်စုရှိ ရှမ်းရွာ အခြေခံပညာ အထက်တန်း ကျောင်းခွဲ အတွက် တစ်ထပ်ကျောင်းဆောင်၊ မြေသားနံရံ၊ ၄ခန်းတွဲအိမ်သာ၊ ၃ခန်းတွဲ အိမ်သာ နှင့် စာရေးခုံ(၄၅)ခုံ လှူဒါန်းခြင်း။
(၁၀.၀၆.၂၀၁၆) ရက်နေ့ အင်းလေးဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက် လှူဒါန်းခြင်း။
(၁၆.၁၆.၂၀၁၆) လွိုင်ကော်မြို့၊ ကယားပြည်နယ်၊ သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး ဝန်ကြီးဌာနသို့ အမှိုက်ပုံအလုံး(၃၀)အား လှူဒါန်းနေပုံ။
(၀၂.၀၇.၂၀၁၆) ရက်နေ့ ကယားပြည်နယ်၊ လွိုင်ကော်မြို့ လောဓလေး ဓါတ်ဦးပွင့်ကျောင်းတိုက် အတွင်းရှိ စေတီရင်ပြင်တော် ခင်းရန်အတွက် ကြွေပြားလှူဒါန်းခြင်း။
(၀၇.၀၇.၂၀၁၆) ရက်နေ့ ကယားပြည်နယ် အတွင်းရှိ ၂၀၁၅/၂၀၁၆ ခုနှစ် ဂုဏ်ထူး(၄)ဘာသာနှင့် (၃)ဘာသာရ ကျောင်းသား ကျောင်းသူများအား ဆုငွေပေးအပ်ခြင်း။
(၁၁.၀၇.၂၀၁၆) ရက်နေ့ ကယားပြည်နယ်၊ လွိုင်ကော်မြို့ လောပိတကျေးရွာအုပ်စုရှိ စာသင်ကျောင်းများသို့ စာအုပ်၊ ခဲတံ လှူဒါန်းစဉ် မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ။
(၁၃.၀၈.၂၀၁၆) ရက်နေ့ ကယားပြည်နယ်၊ လွိုင်ကော်မြို့ လောကထု အခြေခံပညာ မူလတန်းကျောင်းသို့ ကျောင်းခြံစည်းရိုးနှင့် ကျောင်းတံခါး လှူဒါန်းခြင်း။
(၁၄.၀၈.၂၀၁၆) ရက်နေ့ ဘီလူးချောင်း စက်ရုံဝန်းအတွင်း စိုက်ပျိုးရန်အတွက် ပျိုးပင် စုစုပေါင်း (၃၀၀,၀၀၀)ကျပ်ဖိုး ဝယ်ယူခြင်း။
(၁၇.၀၈.၂၀၁၆) ရက်နေ့ ကယားပြည်နယ်အစိုးရုံး၏ နှစ်ပတ်လည်နေ့အတွက် အလှူငွေ (၃,၀၀၀,၀၀၀) ကျပ် လှူဒါန်းခြင်း။
(၂၇.၀၈.၂၀၁၆) ရက်နေ့ ကယားပြည်နယ်၊ ဒီမောဆိုမြို့နယ်ရှိ ဒေါပိုးစီဘုန်းတော်ကြီး ပညာသင်ကျောင်းသို့ ကျောင်းသား/ကျောင်းသူ(၃၀၁)ဦးအား နေ့လည်စာကျွေးခြင်း။
(၁၀.၀၉.၂၀၁၆) ရက်နေ့ အင်းလေးဒေသရှိ ပေါင်းပိုင်းဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းသို့ ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းပေးခြင်း။
(၁၉.၀၉.၂၀၁၆) ရက်နေ့ ၊ ဘီလူးချောင်း တစ်လျှောက် နေရာများတွင် အမှိုက်များ ထည့်ရန်အတွက် အမှိုက်ပုံး(၁၅)လုံး လှူဒါန်းခြင်း။
(၂၂.၀၉.၂၀၁၆) ရက်နေ့ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ပညာသင်နှစ်တွင် ကယားပြည်နယ် အတွင်းရှိ ဂုဏ်ထူးရ ကျောင်းသား/သူ (၁၂၂)ဦး အတွက် ဆုချီးမြှင့်ရန် အတွက် လှူဒါန်းခြင်း။
(၀၄.၁၀.၂၀၁၆) ရက်နေ့၊ ကယားပြည်နယ်၊ လွိုင်ကော်မြို့၊ လောဓမ အခြေခံပညာ အထက်တန်း ကျောင်းအတွက် စာသင်ခုံ အစုံ(၃၀) လှူဒါန်းခြင်း။
(၁၈.၁၀.၂၀၁၆) ရက်နေ့ ကယားပြည်နယ်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းများအတွက် (၂၀,၀၀၀,၀၀၀)ကျပ် လှူဒါန်းခြင်း။
(၂၀.၁၀.၂၀၁၆) ရက်နေ့ ၊ ကယားပြည်နယ်၊ လွိုင်ကော်မြို့၊ လောဓမ အခြေခံပညာ အထက်တန်းကျောင်းအတွက် Basin လှူဒါန်းခြင်း။
(၂၆.၁၀.၂၀၁၆) ရက်နေ့ ဘီလူးချောင်းအမှတ်(၃) စက်ရုံဝန်း အတွင်း စိုက်ပျိုးရန် အတွက် တမလန်းပင်၊ ပိတောက်ပင်နှင့် သင်းဝင်ပင် အပင်များ ဝယ်ယူခြင်း။
(၂၈.၁၀.၂၀၁၆) ရက်နေ့၊ အင်းလေးဒေသ၊ ချောင်းဆုံ အခြေခံပညာ မူလတန်းလွန်ကျောင်းအတွက် ပညာရည်ချွန် ဆုတံဆိပ် (၁၆)ခုလှူဒါန်းခြင်း။
(၁၈.၁၁.၂၀၁၆) ရက်နေ့၊ ကယားပြည်နယ်၊ လွိုင်ကော်မြို့၊ လောပိတကျေးရွာ၊ လောကထုရပ်ကွက်ရှိ အခြေခံပညာ မူလတန်းကျောင်း ခြံစည်းရိုးကာရန်အတွက် လှူဒါန်းခြင်း။
(၁၈.၁၁.၂၀၁၆) ရက်နေ့၊ရက်နေ့ အင်းလေးဒေသ၊မီးရမ်းစင်ချောင်းအတွင်း နှုန်းတားတမံငယ် (၁၀)ခုအတွက် ပထမအကြိမ် ငွေကျပ် (၁,၄၄၆,၀၀၀) ကျပ်လှူဒါန်းခြင်း။
(၃၀.၁၀.၂၀၁၆) ရက်နေ့ ကယားပြည်နယ်၊ လွိုင်ကော်မြို့၊ ရှမ်းရွာ အခြေခံပညာ အထက်တန်း ကျောင်းခွဲ အတွက် PVC Pipe, Tap & Basin လှူဒါန်းခြင်း။
(၀၁.၁၂.၂၀၁၆) ရက်နေ့ ၊ ကယားပြည်နယ်၊ လွိုင်ကော်မြို့၊ ဒေါစောဘီး အခြေခံပညာ အထက်တန်းကျောင်းသို့ စာရေးခုံ (၁၀)စုံ လှူဒါန်းခြင်း။
(၀၆.၁၂.၂၀၁၆) ရက်နေ့ အင်းလေးဒေသ မီးရမ်းစင်ချောင်း အတွင်း နုန်းတာတမံငယ် (၁၀)ခု အတွက် ဒုတိယနှင့် တတိယအကြိမ် ငွေကျပ် (၃၃၇၄၀၀၀)ကျပ် လှူဒါန်းခြင်း။
(၀၈.၁၂.၂၀၁၆) ရက်နေ့ ဘီလူးချောင်းအမှတ်(၃)စက်ရုံ ပတ်ဝန်းကျင်အနီးတွင် စိုက်ပျိုးရန် အတွက် နံ့သာဖြူ တမလန်းပင်၊ ပိတောက်ပင်နှင့် သင်းဝင်ပင် ဝယ်ယူခြင်း။
(၁၆.၁၂.၂၀၁၆) ရက်နေ့ ၊ ကယားပြည်နယ်၊ လွိုင်ကော်မြို့ရှိ ရွှေကယား ပရဟိတအသင်းတို့ လူနာတင်ယာဉ် (၁)စီး လှူဒါန်းခြင်း။
(၂၂.၁၂.၂၀၁၆) ရက်နေ့ ၊ ကယားပြည်နယ်၊ လွိုင်ကော်မြို့၊ ကုန်းသာဘိုးဘွားရိပ်သာရှိ အဘွား(၉)ဦးနှင့် ကျောင်းသား/သူ (၂၂)ဦးအား နေ့လည်စာနှင့် အအေး၊ မုန့်များ လှူဒါန်းခြင်း။
(၂၇.၁၂.၂၀၁၆) ရက်နေ့ ၊ အင်းလေးဒေသ၊ ပေါင်းပိုင်း ရေပယ်အောက်ရွာ ညောင်ဝန်းရှိ အခြေခံပညာ မူလတန်းကျောင်းသို့ လက်ဆေး Basin (၂) စုံလှူဒါန်းခြင်း။
(၂၇.၁၂.၂၀၁၆) ရက်နေ့ ၊ ကယားပြည်နယ်၊ လွိုင်ကော်မြို့၊ လောပိတ အခြေခံပညာ အထက်တန်းကျောင်း ပညာရည်ချွန် ဆုပေးပွဲအတွက် ငွေကျပ်(၁)သိန်း လှူဒါန်းခြင်း။
(၃၁.၁၂.၂၀၁၆) ရက်နေ့ ၊ ကယားပြည်နယ်၊ လွိုင်ကော်မြို့၊ လောဓလေး အခြေခံပညာအလယ်တန်းကျောင်းသို့ လျှပ်စစ်မီးသွယ်တန်းပေးခြင်း။
(၁၂.၀၁.၂၀၁၇) ရက်နေ့ ၊ ကယားပြည်နယ်၊ အခြေခံပညာမူလတန်းကျောင်း၏ ၂၀၁၅ - ၂၀၁၆ ပညာရည်ချွန် ဆုပေးပွဲအတွက် ငွေကျပ်(၁)သိန်း လှူဒါန်းခြင်း။
(၁၇.၀၁.၂၀၁၇) ရက်နေ့ ၊ (၆၅)နှစ်မြောက် ကယားပြည်နယ်နေ့ အထိမ်းအမှတ်ပွဲအတွက် (၃,၀၀၀,၀၀၀)ကျပ် လှူဒါန်းခြင်း။
(၁၉.၀၁.၂၀၁၇) ရက်နေ့ ၊ ကယားပြည်နယ်၊ လွိုင်ကော်မြို့၊ လေးအိမ်စု(ကယား) အခြေခံပညာ မူလတန်းကျောင်း၏ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ပညာရည်ချွန် ဆုပေးပွဲ အတွက် ငွေကျပ်(၁)သိန်း လှူဒါန်းခြင်း။
(၂၀.၀၁.၂၀၁၇)ရက်နေ့၊ ကယာားပြည်နယ်၊ လွိုင်ကော်မြို့၊ ဆိုလစယ် အခြေခံပညာ အလယ်တန်းကျောင်း၏ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ပညာရည်ချွန် ဆုပေးပွဲ အတွက် ငွေကျပ်(၁)သိန်း လှူဒါန်းခြင်း။
(၂၀.၀၁.၂၀၁၇) ရက်နေ့ ၊ ကယားပြည်နယ်၊ လွိုင်ကော်မြို့၊ မိုက်ကန်း အခြေခံပညာမူလွန်ကျောင်း၏ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ပညာရည်ချွန် ဆုပေးပွဲ အတွက် ငွေကျပ် (၁)သိန်း လှူဒါန်းခြင်း။
(၂၅.၀၁.၂၀၁၇) ရက်နေ့ ၊ ကယားပြည်နယ်၊ လွိုင်ကော်မြို့၊ လောဓလေး အခြေခံပညာ အလယ်တန်းကျောင်း၏ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ပညာရည်ချွန် ဆုပေးပွဲအတွက် ငွေကျပ်(၁)သိန်း လှူဒါန်းခြင်း။
(၂၅.၀၁.၂၀၁၇) ရက်နေ့ ၊ ကယားပြည်နယ်၊ လွိုင်ကော်မြို့၊ ကန်နီ အခြေခံပညာ မူလတန်းကျောင်း၏ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ပညာရည်ချွန် ဆုပေးပွဲအတွက် ငွေကျပ်(၁)သိန်း လှူဒါန်းခြင်း။
(၁၁.၀၂.၂၀၁၇)ရက်နေ့ ၊ ကယားပြည်နယ်၊ လွိုင်ကော်မြို့၊ ကန္ဒရဝတီလူမှုကူညီရေးအသင်းသို့ ရေသန့်စက် ဝယ်ရန် အတွက် ငွေကျပ် (၁၀၀)သိန်း လှူဒါန်းခြင်း။
(၁၅.၀၂.၂၀၁၇)ရက်နေ့ အင်းလေးဒေသရှိ နန်းရုတ်ချောင်းတွင် နှုံတားတမံ(၁၀)တည်ဆောက်ရန် အတွက် ပထမအရစ် ငွေကျပ်(၂၀)သိန်း ပေးချေခြင်း။
(၂၂.၀၂.၂၀၁၇) ရက်နေ့၊ ကယားပြည်နယ်၊ လွိုင်ကော်မြို့၊ ဘုရားနီကျေးရွာ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတွင် သိမ်ဆောက်ရန် အတွက် (၁၀၀,၀၀၀)ကျပ် လှူဒါန်းခြင်း။
(၂၄.၀၂.၂၀၁၇) ရက်နေ့၊ ကယားပြည်နယ်၊ လွိုင်ကော်မြို့ရှိ လေးမိုင် သုသာန်တွင် သန့်ရှင်းရေး ပြုလုပ်သော ပရဟိတအဖွဲ့ဝင်များအား ဧည့်ခံကျွေးမွေးခြင်း။
(၂၇.၀၂.၂၀၁၇) ရက်နေ့၊ ကယားပြည်နယ်၊ လွိုင်ကော်မြို့ လောပိတကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးသို့ ကွန်ပျူတာဝယ်ရန် အတွက် (၁၀၀,၀၀၀)ကျပ် လှူဒါန်းခြင်း။
(၂၈.၀၂.၂၀၁၇) ရက်နေ့၊ ကယားပြည်နယ်၊ လွိုင်ကော်မြို့၊ ဒေါဓမ္မဘုန်းကြီးကျောင်းသို့ လျှပ်စစ်မီး သွယ်တန်းပေးခြင်း။
(၂၈.၀၂.၂၀၁၇) ရက်နေ့၊ ကယားပြည်နယ်၊ လွိုင်ကော်မြို့နယ် အတွင်းရှိ ကျေးရွာများသို့ သောက်သုံးရေလှူဒါန်းရန် အတွက် Water Tank (6) Nos ဝယ်ယူခြင်း။
(၂၈.၀၂.၂၀၁၇) ရက်နေ့၊ ကယားပြည်နယ်၊ လွိုင်ကော်မြို့၊ လောပိတ အခြေခံပညာ အထက်တန်းကျောင်း တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲ ဖြေဆိုရန် လွိုင်ကော်သို့ မေးခွန်းများ သွားယူရန် အတွက် Diesel (60) Liters လှူဒါန်းခြင်း။
(၀၈.၀၃.၂၀၁၇) ရက်နေ့၊ မောင်တည်ဇွဲရှိန် (Loikaw GTI First Year) အတွက် ပညာသင် စရိတ်ထောက်ပံ့ခြင်း။ (For Dec 16 to Mar 17)
(၀၉.၀၃.၂၀၁၇) ရက်နေ့၊ ဘိန်းအစားထိုး နှစ်ရှည်ပင် စိုက်ပျိုးရန်အတွက် ဖယ်ခုံ လူငယ်ဖွံ့ဖြိုးရေး အဖွဲ့သို့ ငွေကျပ် (၁၀)သိန်း လှူဒါန်းခြင်း။
(၁၀.၀၃.၂၀၁၇) ရက်နေ့၊ ကယားပြည်နယ်၊ ဒီမော့ဆိုမြို့၊ ဒေါတမကျေးရွာ မိဘမဲ့ စာသင်ကျောင်းအတွက် ဆန်၊ ဆီ၊ ဆားများ လှူဒါန်းခြင်း။
(၁၂.၀၃.၂၀၁၇) ရက်နေ့၊ ကယားပြည်နယ်၊ လွိုင်ကော်မြို့၊ တောင်ကွဲစေတီတော်တွင် ကျင်းပသော (၄၈)ကြိမ်မြောက် ဆွမ်းဆန်စိမ်းလောင်းပွဲ၊ ပင့်သံဃာနှင့် သီလရှင် (၁၈၇၂)ပါးအား ဆွမ်းဆန်စိမ်းလောင်းလှူရန် အတွက် ဆန်(၅)အိတ် လှူဒါန်းခြင်း။
(၁၃.၀၃.၂၀၁၇) ရက်နေ့၊ ကယားပြည်နယ်၊ လွိုင်ကော်မြို့၊ လွိုင်လေးကျေးရွာအုပ်စု ကုန်ဆွတ်ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းသို့ အဝီစိရေတွင်း တူးရန်အတွက် ငွေကျပ်(၁၄၆၅၀၀၀)လှူဒါန်းခြင်း။
(၁၅.၀၃.၂၀၁၇) ရက်နေ့၊ အင်းလေးဒေသရှိ နန်းရုတ်ချောင်းတွင် နှုံတားတမံ(၁၀)ခု တည်ဆောက်ရန် အတွက် နောက်ဆုံးအကြိမ် ငွေကျပ်(၂,၈၂၀,၀၀၀) ကျပ်ပေးချေခြင်း။
(၁၉.၀၃.၂၀၁၇) ရက်နေ့ ၊ ကယားပြည်နယ်၊ လွိုင်ကော်မြို့ နွားလဝိုးကျေးရွာ အောင်သပြေဂူ ဘုန်းတော်ကြီး ကျောင်းသို့ အဝီစိရေတွင်းတူးရန် အတွက် ငွေကျပ် (၁၄၆၅၀၀၀)လှူဒါန်းခြင်း။
(၂၀.ဝ၃.၂၀၁၇) ရက်နေ့ ဘီလူးချောင်းတစ်လျှောက်နေရာများတွင် အမှိုက်များထည့်ရန်အတွက် အမှိုက်ပုံး (၂၀)လုံး လှူဒါန်းခြင်း။
(၃၁.ဝ၃.၂၀၁၇) ရက်နေ့ ကယားပြည်နယ်၊ လွိုင်ကော်မြို့၊ ကုန်းသာ ဘိုးဘွားရိပ်သာသို့ လျှပ်စစ်မီး သွယ်တန်းပေးခြင်း။
(၃၁.ဝ၃.၂၀၁၇) ရက်နေ့ ကယားပြည်နယ်၊ လွိုင်ကော်မြို့၊ လောဓလေးရပ်ကွက်ရှိ ဓာတ်ဦးပွင့် ကျောင်းတိုက်မှ စေတီရင်ပြင်တော်တွင် ခင်းထားသော ကြွေပြားများအား ပြန်လည်ပြုပြင်ရန်အတွက် လှူဒါန်းခြင်း။
ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အလိုက် CSR လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်း
2010-2012 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
36,628,423 27,091,340 119,166,430 103,813,912 107,357,338